2 iminyaka inyanga 1 edlule #614 by rikoooo
Ngithathe ukuthumela lo mlayezo ukwazi lapho-add-on wena ikakhulukazi abafuna ukubuyekezwa, njengoba Ngithathe njengamanje uya ukuvuselela ezimbalwa, ubungeke usize kakhulu kimi ukuthola ofuna kakhulu.
Futhi by the way, uma ungase futhi anginike isixhumanisi inguqulo ebuyekeziwe (kusuka kwenye iwebhusayithi) kuyoba kumnandi.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Gh0stRider203, Jodsalz1, I-Bubble @ i-Sheep
2 iminyaka inyanga 1 edlule #615 by Dariussssss
Kulungile okokuqala, amanye amaphutha ...
A320 mega Pack, kugcina ungabonakali. Kuyinto eziguquguqukayo ku FSX yami, awazi ukuthi kungani.
Thomas Ruth A330 / 340, PFD alibonisi kokubili Itafula kanye overspeed ... nhlobo.
Emirates imikhumbi, FPS ezimbi kakhulu, eshayisa FSX yami ...
izibuyekezo Okungenzeka ...
Nokho, kuyoba ezithakazelisayo ukuze ngandlela-thile uhlangane le A330 / 340 ngu TR, ne A320 Mega Pack, ngokunembile ukuze uhlangane abanikeze asebenza nabo okuyinto enhle kakhulu.
A380, into efanayo, PFD alibonisi kokubili Itafula kanye overspeed.
Uma Ngikhumbula enye into, ngizafaka lapha.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #616 by Gh0stRider203
Dariussssss, yilokho fix lula KAKHULU !!!
1) Khipha izindiza yakho Airbus;
2) kususe lutho Airbus
3) Miselela ngayo Boeing
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: i-denpic
2 iminyaka inyanga 1 edlule #617 by D115
Ngingathanda ukubona Boeing 757 nge esithile izinga VC esikhathini esizayo. Ngicabanga ukuthi 757 bahlulekile kahle FSX.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: I-Bubble @ i-Sheep
2 iminyaka inyanga 1 edlule #619 by Gh0stRider203
D115 wabhala: Ngingathanda ukubona Boeing 757 nge-VC izinga esikhathini esithile esizayo. Ngicabanga ukuthi 757 bahlulekile kahle FSX.
UMA uzimisele uchithe u- $, Quality Wings 757 oluphakeme ehloniphekile
2 iminyaka inyanga 1 edlule #649 by julian1245
Kwezinye zezindiza kwenza izinjini ziqhume ngoba zibukeka zimbi kakhulu uma zingaphenduki #realism
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #669 by Macca22au
Abaningi bavuselelwe ku-P3D4 ngangokunokwenzeka, ne-VCs ngokuphelele.
Kodwa ubuyekeze ku-V4 i-A320 ne-B737-800 ngokushesha nje uma umbhali ejabulisa ......
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #671 by Jakedertree
Ngingathanda i-VC engcono ye-Airbus A400M. Futhi, uma umbhali kungenzeka akwazi ukunikeza imiyalo ethile yokwenza ingaphansi kwesandla sigcwele phansi, lokho kuyoba okumangalisayo. Igijima iHARD, futhi angikwazi (futhi angazi) ukuthola indlela yokukhipha izinjini ngesikhatsi itekisi.
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #673 by Sergiozaki
Ama-Boeing 777 pls we-P3D v3 / v4
Isebenza ngokugcwele i-VC panel plss ...
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #674 by Sergiozaki
I-A380 P3D v3 / v4
Iphakamisa amapoli, i-VC yangempela ye-380
Isikhathi ukudala page: 0.455 imizuzwana